I-infinity emhlangeni, indaba yencwadi engakaze itshelwe | Izincwadi Zamanje
UJuan Ortiz | | Isivivinyo, Abalobi, Umlando wezincwadi
Infinity emhlangeni yindatshana elungiselelwe ngumbhali kanye nesazi sefilogili esivela eZaragoza Irene Vallejo. Ushicilelwe ngo-2019, lo mbhalo ukhumbula ngokuningiliziwe umlando wokudalwa nokuvela kwencwadi phakathi namakhulu eminyaka. Ngemuva konyaka, ngenxa yokuphumelela nokwamukelwa kwawo, lo msebenzi uthole imiklomelo eminingana, phakathi kwayo okukhona: iSpanish National Essay Award kanye neCritical Eye for Narrative.
Ngalesi sihloko, umsebenzi wombhali wawudwetshwe, ikwazile ukudlula amakhophi angama-200.000 athengisiwe futhi ngokushesha ube ngumthengisi othengisa kakhulu. Umsebenzi wakhe wawujabulela ukwamukelwa okukhulu enhlabathini yaseSpain, eyavumela ukwenziwa kwamazwe ngamazwe, njengoba yayihunyushelwe ezilimini ezingaphezu kwezingama-30 kuze kube manje.
1 I-infinity emhlanga (2019)
1.1 Indaba ezalwe phakathi nobunzima
1.2 Indaba ehlukile nephelele
2.1 Izifundo zobungcweti
2.2 Impilo yangasese
2.4 Umjaho wezincwadi
Infinity emhlangeni (2019)
Yindaba enamakhasi angaphezu kwama-400, okuyi elandisa ukusungulwa kwencwadi, okuyingxenye yokuthuthuka kwayo nemicimbi ebalulekile phakathi nomlando wayo. Kulo msebenzi kuchazwe cishe iminyaka engama-3000 yemicimbi, phakathi kwesikhathi esedlule nesamanje. Indatshana va selokhu kwadalwa incwadi yokuqala, imitapo yolwazi yokuqala kanye nabafundi bezwe lasendulo, kuze kube manje.
Ngalo msebenzi umbhali ukwazile ukuba ngowesifazane wesihlanu ukuzuza iSpanish National Essay Prize (2020), ngaphezu kokuthola ukuphawula okuhle kakhulu. Phakathi kokuncoma, amazwi kaMario Vargas Llosa avelele: “Kubhalwe kahle kakhulu, kunamakhasi ancomekayo ngempela; uthando lwezincwadi nokufunda yisimo esidlula kuso amakhasi alo msebenzi wobuciko ”.
I-infinity emhlangeni: ...
Indaba ezalwe phakathi nobunzima
Umbhali wayebhekene nesikhathi esinzima somndeni Ngesikhathi eqala ukubhala le ncwadi, indodana yakhe yayigula kakhulu. Izinyanga eziningi wayehlala esibhedlela nengane yakhe encane, phakathi kwenqwaba yokwelashwa, amakhemikhali, izinaliti nezingubo eziluhlaza okwesibhakabhaka.
Kodwa U-Irene waphinde wabalekela ezincwadini, kulokhu wabhala eyakhe indatshana. Ngenkathi ekhululeka ngumyeni wakhe, wayeya ekhaya, athathe incwadi yakhe yokubhala, bese eqala ukubhala. Ngale ndlela, i-litterat ibinomzuzu wokuthula nokuthula, kude nalokhu kukhathazeka kwesikhashana. Ngaphandle kokusola nokuthi uzobe ebhala impumelelo ezoshintsha izimpilo zabo.
Indaba ehlukile nephelele
Ikhathalogi eminingi Infinity emhlangeni njengendatshana engavamile nehlukile, ngoba okuqukethwe kwayo kuphelele futhi kuhlukahlukene. Kuyo, kungenzeka ukuthola imininingwane ejwayelekile neyendabuko efana namahlaya, izinkondlo, izingxoxo, izindaba zasemakhaya, ama-biographies, izingcezu zezintatheli kanye ne-etymologies. Ngaphezu kwezigcawu ezinkulu zomlando ezikhona ngaleyo ndlela ebanzi engaphezu kwamakhulu eminyaka angama-30.
Igama umbhali ekuqaleni ayefuna ukulinika i-eseyi kwakungu: Ukwethembeka okuyimfihlakalo, ukukhokha intela kuBorges. Kepha yashintshwa ngesiphakamiso sendlu yokushicilela, kulokhu kubhekiswe kuPascal, owakhomba ukuthi abantu "babeyimicu yokucabanga".
Umsebenzi uqukethe izingxenye ezimbili; okokuqala: IGrisi icabanga ngekusasa, inezahluko eziyi-15 eziphelele ngaphakathi. Lapho, indaba ihamba ngezindlela ezahlukahlukene: impilo nomsebenzi kaHomer, izinkundla zempi zika-Alexander the Great, iLabhulali enkulu yase-Alexandria - inkazimulo nokubhujiswa kwayo - uCleopatra. Futhi, izikhathi ezinzima zesikhathi nempumelelo: ukuqala kwe-alfabhethi, incwadi yokuqala nezitolo zezincwadi ezijikelezayo.
Ngemuva kwalokho unayo ingxenye yesibili: Imigwaqo yaseRoma. Lesi sigaba siqukethe izahluko eziyi-19, phakathi kwazo kukhona: "Ababhali Abampofu, Abafundi Abacebile"; "Isitolo samabhuku: ukuhweba ngobungozi"; "U-Ovid ushayisana nokucwaninga"; ne- "Canon: umlando womhlanga". Umbhali uyavuma ukuthi kwakukhona umuntu wesithathu owahamba waze wasungulwa umshini wokuphrinta, kepha nginqume ukukugcina lokho okuqukethwe, ngoba kungenza indatshana ibe nde kakhulu.
Kuyi-eseyi ukuthi uhamba ngokunwetshwa kwencwadi ngezinto ezahlukene, njenge: intuthu, itshe, ubumba, umhlanga, ubumba, i-papyrus, isikhumba nokukhanya. Yini enye, ibuye ilandise ngezehlakalo zomlando lapho bachazwa khona: izinkundla zempi, ukuqhuma kwentaba-mlilo, izigodlo zamaGrikhi, ukuqala kwemitapo yolwazi nezindawo zokwenza amakhophi abhalwe ngesandla.
Ngesikhathi sendaba izinhlamvu ezahlukahlukene ziyavela futhi zisebenzisane, labo kumele unqobe inani elikhulu le- izinkathazo zokuvikela izincwadi. Akukhulunywa ngamaqhawe amakhulu, kepha kukhulunywa ngabantu abajwayelekile: othisha, abathengisi, ababhali, ababalisi bezindaba, amavukelambuso, abahumushi, izigqila, phakathi kwabanye.
Ngokufanayo, ikhuluma ngomlando wesikhathi samanje; Ingxenye ebalulekile yemizabalazo ethinta indikimba yezemibhalo iyavezwa. I-akhawunti ephelele yezigaba ezahlukahlukene izincwadi ezidlule kuzo ngenkathi zisinda njengenye yezindlela ezibaluleke kakhulu zokusabalalisa ulwazi.
Ngo-1979, idolobha laseZaragoza labona ukuzalwa kuka-Irene Somoza. Kusukela esemncane kakhulu, waqala ukuzihlanganisa nezincwadi, ngenxa yokuthi abazali bakhe babemfundela futhi bemxoxela izindaba ngaphambi kokulala. Ngo-6 wahlangana I-odyssey, uyise wayixoxela yena ubusuku nobusuku njengendaba, futhi kusuka lapho ungumuntu othanda izindaba ezimayelana nezinganekwane.
Esikhathini sakhe sokufunda wayeyisisulu se- ukuxhaphazwa ngabafundi afunda nabo, abaze bamhlukumeza emzimbeni. Umndeni wakhe wawusekela okuyisisekelo kulesi sigaba, yize isiphephelo sakhe esikhulu kwakuyizincwadi. Ku-Irene, ukufika ekhaya nokufunda kwakuthathwa njengohlobo lwensindiso.
Umbhali wenza izifundo zakhe mkhulu en amanyuvesi aseZaragoza naseFlorence, lapho athola khona iziqu futhi kamuva wathola iziqu zobudokotela ku I-philology yakudala. Ngemuva kokuphothula umsebenzi wakhe, uzinikele ekujuliseni nasekusabalaliseni konke okuphathelene nezincwadi zakudala.
I-litterat ingukuthi ushade nomkhiqizi wamafilimu u-Enrique Mora, nobani unendodana egama linguPedro.
Ngaphandle komsebenzi wakhe njengombhali nophilologist, ubesebenza njengothisha emanyuvesi ahlukahlukene kuleli. Okwamanje, ubhala izindatshana zamaphephandaba aseSpain El País y UHerald wase-Aragon, lapho ukuhlakanipha kwasendulo kuhlangana khona nezindikimba zanamuhla. Eziningi zalezi zibuyekezo zahlanganiswa kweminye yemisebenzi yakhe: Okwedlule okulindele (2008) futhi Umuntu othile ukhulume ngathi (2010).
Umbhali kufanele akhokhelwe izincwadi eziyi-8, okuthunyelwe kwakhe kokuqala kwaba: Isibani esingcwatshiwe, injabulo eyakhishwa ngo-2011. Kamuva, wangena ezincwadini zezingane nentsha, nge Umsunguli wohambo (2014) futhi Inganekwane yamagagasi amnene (2015). Uqhubeke wathi: Impempe yomcibisheli, indaba yothando nokuzidela eshicilelwe ngo-2015.
Incwadi yakhe yakamuva ifike ngo-2019: Infinity emhlangeni, y ngesikhathi esifushane kwaba okuhamba phambili. Le ndatshana inikezwe amahlandla amaningi selokhu yashicilelwa. Ngaphezu kweCritical Eye of Narrative (2019) kanye ne-National Essay (2020), waphinde wathola umehluko: Los Libreros Recommend (2020), José Antonio Labordeta Prize for Literature (2020) kanye ne-Aragón Prize 2021.
Umtapo wolwazi kanye namagama asemqoka okubhala eMarcial (2008)
Okwedlule okulindele (2010)
Isibani esingcwatshiwe (2011)
Umsunguli wohambo (2014)
Inganekwane yamagagasi amnene (2015)
Impempe yomcibisheli (2015)
Umuntu othile ukhulume ngathi (2017)
Indlela ephelele ye-athikili: Izincwadi Zamanje » Izinhlobo » Isivivinyo » Infinity emhlangeni
Usuku okwalahleka ngalo ingqondo